Wararka Maanta: Khamiis, Jun 13, 2019-300 oo arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Green Hope ee magaalada Muqdisho
Munaasabadda qalin jabinta ardayda ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, waalidiin iyo marti sharad kale.
Ugu horrayn, maamullaha jaamacadda Green Hope Mustaf Macallin Cabdulle, ayaa ugu hambalyeeyay ardayda guusha ay ka gaareen waxbarashada ay muddada wadeen, isagoo marka u rajeeyay in cilmiga ay barteen uu u horseedo horumar.
" Ardaydaan waa arday u qalanta inay shahaado guddoomaan, waxay usoo dhabar-adeegeen waxbarashadooda kana miradhaliyeen inay maanta shahaadadda qaataan." ayuu yiri Mustaf Macallin Cabdulle.
Agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya,Dr Ismaaciil Yuusuf ayaa ardayda u gudbiyay farriin hambalyo ah isagoo marka ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya.
" Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, gaar ahaan qeybta aan ka tirsanahay ee tacliinta sare waxay ardayda usoo gudbinaysa hambalyo, waad guuleysateen jaamacadda Green Hope way guuleysteen." ayuu yiri Dr Ismaaciil Yuusuf .
Qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay oo dareenkooda ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsanyihiin waxbarashadii ay soo wadeen muddada dheer ee ay maanta ka qalin jabiyeen, iyaga oo sidoo kale u mahadceliyay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda.
Gabagabadii, Xildhibaan Farxiyo Muumin Cali oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo munaasabadda soo xirtay ayaa ku macneysay magaca jaamacadda Green Hope - doog iyo rajo, iyada oo markale ugu hambalyeesay ardayda guusha ay ka gaareen waxbarashada, waxaa kalo ay si gaar ah ugu mahadcelisay macalimiinta iyo maamulka jaamacadda.